DEG DEG Kheyre oo Sogootin Cajiib ah looga Sameeyay Villa Somalia iyo Halka uu degay oo la Shaaciyay – Benaadirtv.com
DEG DEG Kheyre oo Sogootin Cajiib ah looga Sameeyay Villa Somalia iyo Halka uu degay oo la Shaaciyay
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gabi ahaan ka guuray hooygii uu ka deganaa madaxtooyada Soomaaliya oo uu deegaansanayay saddex sano iyo barkii ugu dambeeyay, taas oo ka dhalatay ka dib markii dhammaadka bishii hore ee ay codka kalsoonida kala noqdeen Xildhibaanada golaha Shacabka.
Daad gureynta Agabkii ka yaalay madaxtooyada Soomaaliya ayaa socotay mudo labo maalin ah, waxaana ugu dambeyn shalay la raray alaabtii ugu dambeysay ee Xasan Cali Kheyre ka taalay Villa Soomaaliya, waxaana la arkayay gaadiid qaadaya Agabka guriga oo dhammeystiran ,sida ay inoo sheegeen dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa agagaarka Madaxtooyada.
Sida aan ogaanay, Xasan Cali Kheyre, saaxiibkii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa degay deegaanka ku dhow Garoonka diyaaradaha Muqdisho, halkaas oo inta badan madaxda Dowladda Federaalka iyo Hay’ado shisheeye ay degan yihiin si weyna loo ilaaliyo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si milgo iyo maamuus leh u sagootisay Ra’iisal wasaarihii hore oo xil ka qaadistii ay ka dhalatay Khilaaf, inkastoo mudo kooban ka dib xil ka qaadistiisa uu aqbalay madaxweyne go’aanka Baarlamaanka, wuxuuna Mahdi Guuleed u magacaabay in uu noqdo ra’iisulwasaare ku meel gaar ah.
Inkastoo, Xilka qaadista Kheyre Baarlamaanka ay ku saleeyeen waxqabad la’aan iyo inuu ka gaabiyay howlihii muhiimka ahaa ee loo igmaday ayaa hadana dhanka kale,waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay, xukuumaddii uu hoggaaminayay ay dib u habaysay ciidammada qaranka, nidaamka maaliyadda dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, bixinta mushaarka shaqaalahala iyo ciidammada, dowlad wanaag iyo soo celinta sida uu sheegay sharafta Soomaaliyeed.
“Muddaasi saddexda sano iyo barka ah, xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysannay hawlo waa weyn. Waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxal gal ah ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin in ay la wareegaan amniga guud ee dalka,” ayuu yiri.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hadda raadinaya qofkii bedeli lahaa Kheyre, wuxuuna sii marayaa saddex todobaad oo uu Xafiiska sii haye ka yahay Mahdi Guuleed oo daacad u ah madaxweynaha.
13th Aug 2020 13th Aug 2020 Editor
Previous Previous post: Shirka Dhuusamareeb 3 oo qarka u saaran fashil?
Next Next post: Mareykanka: Ma jiri doonto muddo kororsi